XOG:- Sababta Madaxweyne Farmajo uga baaqday munaasabadii Tiyaatarka oo la ogaaday iyo Wakiilkiisa oo jeediyay.... | Ceeldheer News: Somalia News Update
XOG:- Sababta Madaxweyne Farmajo uga baaqday munaasabadii Tiyaatarka oo la ogaaday iyo Wakiilkiisa oo jeediyay….
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si lama filaan ah uga baaqday xaflad lagu qabtay Tiyaatarka Qaranka, taasoo loogu mahadcelinayay dadkii soo diyaariyay Manhajka waxbarashada Soomaaliya.
Munaasabadda ka qeyb-galkeeda ee madaxweynaha ayaa aheyd mid la iskasii ogaa, iyada oo Ciidanka ilaalada Madaxtooyada ay Xalay xireen agagaarka tiyaatarka iyadoo saakayna dadka iyo gaadiidkaba loo diiday ilaa Isgoysyada, Boondheere, Jubba iyo agagaarka Dekadda Muqdisho.
Si rasmi ah looma oga sababta uu uga baaqday, hase yeeshee waxaa jiray Sawiro iyo qoraalo qabsaday baraha Bulshada saacadihii hore ee saakay, kuwaas oo ku saabsanaa carruur saqiiro ah oo usoo lugeeyay Iskuulada markii loo xiray wadooyinka Madaxweynaha waxaana markii ay Iskuulkooda lug ku soo gareen celiyay ciidanka ilaalada Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidaan dhowr jeer uga baaqday Munaasabado la filayay in uu ka qeyb-galo islamarkaana uu hadal ka jeediyo sababo la xiriira,amniga madaxweynaha,waxaase xusid mudan in maanta magaalada Muqdisho uu ka dhacay qarax.
Qaraxaan oo aha mid Miino ayaa Kolonyo ay la socdeen ciidamada AMISOM lagula eegtay Isgoyska Fagax ee mafgaalada Muqdisho,waxaana Rasaas ay rideen ciidamada AMISOM uu ku dhintay Nin weday Gaari Dameer oo si bareer ah ay u toogteen.
Dhinaca kalana magaalada Muqdisho ayaa shalay waxaa ka dhacay qarax Ismiidaamin ah oo uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa kaas oo ka dhacay Maqaaxi ku taalla ka soo hor jeedka xarunta tababarka ciidamada boliiska ee Gen.Kaahihiye ee magaaladaMuqdisho waxaana ku dhinta in ka badan 10-qof,halka tiro intaas ka badana ay ku dhaawacmeen.
Madaxda dowladda oo ka hadashay geerida Ra’iisul Wasaarihii hore ee Somalia
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida Ra’iisul Wasaarihii hore ee Somalia
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida Ra'iisul Wasaarihii hore ee Somalia